प्रधानमन्त्रीज्यू, न्याय मर्न नदिनुस् « Bagmati Samachar
४ आश्विन २०७६, शनिबार १६:४१
नमस्कार । तपाईंको सु स्वास्थ्यको कामना ।मेरो नाम प्रकाश चन्द । म अहिले चितवन मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस इन्टर्नसिप गर्दैछु । वैचारिक हिसाबले म पनि एक सच्चा कम्युनिस्ट सेवक हुँ । पारिवारिक हिसाबले म प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को छोरा हुँ ।
माफिया इटालीबाट उत्पत्ति भएको शब्द रैछ। माफियाको प्रभाव सडकदेखि सत्तासम्म हुँदो रहेछ । उनीहरूको पहुँच कर्मचारी, प्रशासन, प्रहरी, राजनीतिज्ञ सबैसम्म हुँदो रहेछ । सत्ता पनि उपयोग गरेर उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दा रहेछन् । उनीहरूविरूद्धका आवाज दबाउँदा रहेछन् ।
हामीले हाम्रो कुरा भन्न जाँदा सरोकारवाला निकाय किन माफियाको खल्तीमा लुकेझैँ गर्छन् ? किन हाम्रो कुरा सुन्दैनन् ? आम नागरिकले तिरेको करको पैसाले चलेको न्यायालय, प्रशासन र सरकारी निकायलाई उनीहरूले पनि ठूलो वैकल्पिक बजेट छुट्याउँछन् कि के हो, हाम्रो कुरै सुन्दैनन् । हामीलाई न्याय दिँदैनन् । हामी विद्यार्थीले त अन्याय भयो भन्ने ठाँउ पनि पाएनौँ ।